Antonio Conte oo ka hadlay halista ay leedahay in la ciyaaro taageero la’aan kulanka Derby d’Italia – Gool FM
(Milano) 28 Feb 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Antonio Conte ayaa ka hadlay qatarta ay leedahay in la ciyaaro taageero la’aan kulanka Derby d’Italia.
Inter Milan ayaa xalay u soo baxday wareega 16-ka tartanka UEFA Europa League, kaddib markii ay naadiga Ludogorets Razgrad kaga adkaatay 2-1, kaddib ciyaar aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Giuseppe Meazza.
Antonio Conte ayaa ciyaarta kaddib wuxuu ka hadlay halista ay leedahay in la ciyaaro taageero la’aan kulanka Derby d’Italia, wuxuuna yiri:
“Horey ayaan u ciyaaray kulan taageero la’aan ah, ciyaar dhex martay xulalka Talyaaniga iyo Croatia, waa jawi layaab leh, waxayna ku dareensiineysaa sida inaad ku jirto tababar oo kaliya taasina waa halis”.
“Laakiin ciyaartoyda waxay ogaadeen kaddib markii gool nalaga dhaliyay, waxaana kaga soo baxnay waxyaabo badan oo wanaagsan kulankaas”.
“Waxaa inoo bilowday taxanaha cadaadiska kulamo badan, waxaana na sugeysa shaqo adag kulanka aan la ciyaareyno kooxda Juventus”.
“Marka aan gaarno dhamaadka waqtigaas waan fahmi doonaa halka aan joogno, waxaanan ku qanacsanahay inaan si cad u ogaan doono mustaqbalka.”
Waxaa xalay la xaqiijiyay in kulanka horyaalka Serie A ee Derby d’Italia kaasoo dhex mari doono kooxaha Juventus iyo Inter, uu noqon doono mid albaabada ay u xirnaan doonaan isla markaana la ciyaari doono taageero la’aan, sababa la xiriira faafitaanka viruska Corona.